Kismaayo News » Qaramada Midoobey oo diirada ku haysa doorashooyinka 2020-ka ee Soomaaliye
Qaramada Midoobey oo diirada ku haysa doorashooyinka 2020-ka ee Soomaaliye
Kn: Mas’uulka labaad ee ugu sareeya Qaramada Midoobey ayaa booqasho ku tagay Xamar, wuxuuna diirada saarayaa sidii ay u dhici lahaayeen doorashooyin qof iyo cod ah sannadka 2010-ka.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra’iisal wasaare Xassan Cali Kheyre ayaa kulan la yeeshay ku-xigeenka xog-hayaha QM ee dhinaca siyaasada Jeffrey D. Feltman oo maanta Muqdisho.
Kulanka mas’uuliyiinta sare ee dowladda iyo Jeffrey D Feltman waxaa looga hadlay xaalada Soomaaliya dhinacyada siyaasada, amniga, dhaqaalaha, dastuurka, iyo xiriirka dowlad gobolleedyada iyo dowladda dhexe.
“Soomaaliya waxey ku tallaabsaneysaa horumar ballaaran oo laga sameynayo dhinaca siyaasadda iyo amniga iyo dhismaha mustaqbal wanaagsan oo horseedaya dib-u-soo kabashada dalka, waxaaa hubaal ah in aan ka mira-dhalin doonno barnaamijyada la xiriira dhismaha Soomaaliya xoog leh oo sharcigu sareeyo’’ ayuu yiri ra’iisal wasaare Kheyre.
Jeffrey D. Feltman ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay kulanka uu la qaatay mas’uuliyiinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya, isaga oo sheegay in uu soo dhaweynayo dhinaca kale hormarka muuqada ee waqtigan Soomaaliya ka jira.
‘’Waxaa Soomaaliya kala shaqeyn doonnaa gaarida doorasho madax-banaan oo xor ah sanadka 2020ka, dib-u-eegista dastuurka, arimaha federalka, iyo siddii caalamku Soomaaliya u siin lahaa taageero buuxda’’ayuu yiri Jeffrey D Feltman.